DHIRTA LO'DA EE LOOGU TALAGALAY DIGAAGGA: SIDA LOO SAMEEYO CUTTER FEED OO LEH GACMAHAAGA - SOOSAARKA DALAGGA
Dhirta lo'da ee loogu talagalay digaagga: sida loo sameeyo cutter feed oo leh gacmahaaga
Beeraley kasta oo haysta ugu yaraan barnarka yar, waxaa jira baahi loo qabo in lagu diyaariyo cunto cusub, taas oo xayawaanka dhallinta yar iyo kuwa qaangaarka ah ay u badan tahay inay cunaan.
Waa arrintani in ay jirto shredders si loo abuuro jajab jajab yar.
Isticmaalka cutubka beeraha
Dhammaan beeraleyda waaweyn waxaa ka jira wargeysyo caws, caws, xayawaan si loogu diyaariyo isku darka cuntada ee digaagga, bakaylaha iyo xayawaanka kale. Badanaa cutubyadani waa kuwo aad u awood badan, waxaana loogu talagalay in ay la shaqeeyaan tiro badan oo ah quudinta. Wixii beeraha yaryar, oo xoolaha xayawaanka yar yar, isticmaalka mishiinnada noocan oo kale ah looma ogola. Shaki kuma jiro, in shirkado badani ay ku hawlan yihiin soo saarida qalabka yaryar oo yar-yar, laakiin qiimahooda badanaa wuu aad u sarreeyaa macaamilka caadiga ah, taasina waxay keentay in dad badani ay soo aruuriyaan xayawaanka cawska leh gacmahooda.
Sidoo kale akhri sida loo sameeyo coop digaag, qafis qaboojiye, cabitaan iyo nuujiyo digaagga oo leh gacmahooda.
Sida loo sameeyo sheyga beerta
Gacan-gacmeed, gacmo-gacmeed, wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan. Wax soo saarkeedu waa ka raqiisan yahay iibsashada warshadda, sababtoo ah qaybaha muhiimka ah iyo qaybaha loo baahan yahay ayaa laga heli karaa gacanta. Qalab noocan oo kale ah ayaa loo ururin karaa diyaarinta wax cunto gaar ah. Ka dibna waxaynu eegnaa dhowr nooc oo qalabka guryaha lagu sameeyo.
Habka ugu fudud: isticmaal matoor
Naqshadeynta isku-dhafka iyadoo la isticmaalayo maro sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee naqshadaynta sheyga jikada caadiga ah. Waxaad u baahan doontaa mashiinno awood leh ugu yaraan 620 W, doorbida baaldi bir ah (cawska) iyo mashiinka mindi. Saldhigga naqshadaynta sharkan oo kale waa ul dheer oo dhererkiisu yahay 30 illaa 40 cm, iyo dhexroorka - laga bilaabo 10 ilaa 12 mm, dhamaadka rodolku waa inay ahaataa muraayad qiyaastii 40 mm ah si loogu xiro mindida (mindi) inta u dhaxaysa dhowr nuts. Mishiinka waxaa laga samayn karaa lakab loo yaqaan "hacksaw old olds", shidaalku wuxuu noqon karaa hal dhinac ama laba dhinac, ama waxaad ka iibsan kartaa mindi loogu talagalay mashiinka mashiinka.
Ma taqaanaa? Waxaad dhisi kartaa qaab dhismeed si aad u hagaajisid baaldiyaha - tani waxay fududeyneysaa geedi socodka jilitaanka.
Laga soo bilaabo qalabka nadiifinta
Hawlgalka noocan oo kale ah wuxuu u eg yahay mabda'a hawlgalka. mashiinka cuntada. Faa'idadiisu waa wax soo saar badan iyo meeleyn. Waxaa sidoo kale la saadaalinayaa in alaabta la qabadsiiyay ay ka baxdo godka hoose ee hoose ee baaldi hore loo buuxiyey.
Qeybtan, waxaad u baahan tahay nadiifiye fayadhowr, ama halkii jirkiisa: ugu haboon wuxuu noqon doonaa qashinka qubayska ee "Typhoon", laakiin mid ka mid ah wax la'xaad la'aantaada mid kale ayaad u bedeli kartaa. Waxa kale oo aad u baahan tahay koronto koronto oo 180 W ah iyo ka badan: waxaa laga saari karaa mishiinka da'da hore. Boomadaha, sida kiiskii hore, waxaa laga samayn karaa daabac aan loo baahnayn. Dharka gacmo gaaban oo loogu talagalay mindida oo la mariyo nuts waa in la gooyaa mashiinka, dhererkeedu waa 40 mm.
Horeyba waa lagama maarmaan in tuubada, taas oo aan ka samaysanay nadiifinta qalabka nadiifinta, si loo yareeyo godka loogu talagalay qaboojiye qaabeysan oo uu ku istaagi doono. Mashiinku wuxuu ku xiran yahay hoose ee tuubada, ka dibna mindiyaha waxaa lagu taagay caawinaadda 32mm nuts. Furitaanka jajabinta waa in ay ahaataa 7 cm oo ah 7 cm oo cabir ah waxayna ku taallaa mindiyaha ama dhinaca hoose.
Waa muhiim! Wixii xasilin weyn, waa in tuubada loo xiraa qaabka.
Balaamijka mashiinka dharka lagu dhaqdo ayaa si buuxda isku mid ah u ah kan laga sameeyay nadiifinta suufka - farqiga keliya ayaa ah cabbirka. Halkan, mashiinka mashiinka dharka lagu dhaqo waxaa loo isticmaalaa sida weel (sida aad doorbidayso), gacanyartuna waa inay ahaataa ugu yaraan 5 cm dheer.
Waa muhiim! Si aan kor loogu qaadin mishiinka, ha dhigin caws badan.
Talooyin iyo tabaha loo sameeyo sameynta
Wixii bir weel ah oo cawska loo rogi doono, mabda 'ahaan, weel kasta oo birta ah ee cufka ah ee mugga ballaaran ayaa ku habboon, xataa xitaa dhagax weyn ayaa soo degi kara. Sida horey loogu soo sheegey, sida mindi, waxaad isticmaali kartaa boodbooyin alwaax joogta ah, kuwaas oo noqday kuwo aan la isticmaali karin, laakiin, iyada oo ku saleysan dib-u-eegisyo ka yimid goobo kala duwan, fursadda ugu fiican waxay noqon kartaa mindhicirka guriga laga sameeyo barta xiranka. Si loo yareeyo qalooca inta lagu jiro qalliinka, laba mindi ayaa la geyn karaa crosswise.
Ma taqaanaa? Si ay qalabku u burburin karaa laamaha, isticmaal mishiin batroolka.
Mid kasta oo ka mid ah qalabka kor ku xusan wuxuu leeyahay dabayshyo fiiqan, waxaana sidoo kale lagu qalabeeyaa koronto-koronto. Si loola shaqeeyo qalabkaas ayaa fududeeyay nadiifintaada gurigaaga, oo aan sababin dhaawac, waa in la ilaaliyaa xeerarka habdhaqanka nabdoon ee leh jarida walxaha iyo qalabka korantada, iyo ugu muhiimsan - Ka ilaali jarjar carruurta.
Cawska ugu wanaagsan ee digaagga waa cawska dhuxusha iyo dalagyada miraha: alfalfa, digir, sarreen iyo miro, iyo sidoo kale cowska cagaaran: lowska, kalluunka iyo marabuurka.